Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Jardiinooyinkan qaran ee Mareykanka ayaa ah kuwa ugu liidata
Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Parks Theme • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
The Indiana Dunes waxay ka mid yihiin jardiinooyinka qaranka ee ugu booqashada badan dalka, oo leh 2.3 milyan oo soo booqday sannadka 2020, haddana waxay umuuqataa in dad aan badnayn ay ku dhufteen beerta harada, iyadoo kaliya 51% dadku ay ku qiimeeyeen inay aad u fiican tahay.
Jardiinooyinka qaranka ee Mareykanka sida Yosemite iyo Grand Canyon ayaa sanad walba soo jiita malaayiin qof oo soo booqda.
Daraasad cusub ayaa lafagurtay dib u eegista jardiinooyinka qaranka Mareykanka oo ay ka yaraayeen 1 milyan oo soo booqda sannadkii si loo muujiyo kuwa ugu liidata.
Daraasadu waxay sidoo kale eegtay jardiinooyinka qaran ee ugu xad -dhaafka badan Maraykanka.
Jardiinooyinka qaranka ee caanka ah sida Yosemite iyo Grand Canyon waxay soo jiitaan malaayiin qof oo soo booqda sanad walba, taas oo adkeyneysa in booqdayaasha ay noqdaan kuwo hal dabeecad leh marka dariiqyada dadku ku badan yihiin oo ay saf ugu jiraan aragtida.
Markaa haddii aad rabto inaad ka baxsato dadka oo aad la kulanto mid ka mid ah dhagxaanta ugu qarsoon dalka, waa kuwee jardiinooyinka qaran ee aad u aadi lahayd?
Daraasad cusub ayaa lafa guray dib u eegista Beerta Qaranka Mareykankawith oo leh wax ka yar 1 milyan oo booqasho sanadkii si ay u muujiyaan jardiinooyinka qaranka ee ugu liidata dalka. Daraasadu waxay sidoo kale eegtay jardiinooyinka ugu badan Ameerika, iyada oo tirooyinka booqdayaasha ay ka badan yihiin 1 milyan oo dib u eegisyo liita ah.
10 -ka jardiino qaran ee ugu liita USA
Rank Beerta Qaranka Wadarta booqdayaasha (2020) % dib u eegista “aad u fiican”
8 Qalalan Tortugas, Florida 48,543 82.9%
Marka la eego inay ku taallo Alaska, waxaa laga yaabaa inaanay la yaab ahayn in la arko in Glacier Bay ay heshay 5,748 qof oo soo booqday 2020. Si kastaba ha ahaatee, kuwa soo booqday jardiinadan quruxda badan ayaa si cad u jecel jaceylka waaweyn iyo barafka iyo buuraha barafka leh , oo leh 92.9% dib u eegista beerta ee Tripadvisor oo ku tilmaamtay mid aad u fiican!
Beer kale oo Alaskan ah ayaa qaadata kaalinta labaad, iyada oo Kenai Fjords ay heshay celcelis ahaan 89.9% dib -u -eegisyo “aad u fiican” laakiin in ka badan 100,000 oo booqdeyaal ah sannadkii. Kenai Fjords waxay hoy u tahay Harding Icefield, oo ah mid ka mid ah beeraha barafka ee ugu weyn dalka, kaas oo ah isha ugu yaraan 38 baraf -baraf iyo sidoo kale fjords badan.